Nzira yekubvisa earwax?
ne admin pane 21-08-17
Usaedze kuichera kunze Usambofa wakaedza kuchera yakawandisa kana kuomesa earwax nezvinhu zviripo, senge pepa clip, swabuni yekotoni kana hairpin. Unogona kusundira wakisi kumberi munzeve yako uye wokonzeresa kukuvadza kumutsara wegero renzeve yako kana eardrum. Nzira yakanakisa yekubvisa yakawandisa ea ...
Chii chinobatsira kofi enema? 1. Caffeine inomutsa kuvharirwa kwe glutathione, iyo yakakosha enzayimu yekudzora hutachiona uye kubvisa mahara radicals. 2. Iyo caffeine uye theophylline iri mukofi inoderedza tsinga dzeropa mumudumbu wemukati uye kubvisa enteritis. 3. Iyo ...
Chii chinoita kuti bvudzi rakakura riome?
Yakanakisa Bvudzi Dzaomesa Yekukurumidza, Nyore Blowout Kumba Kiyi kune yakanaka, salon-chikamu bvudzi zuva rega rega rakakura bvudzi kuomesa kune nyore kurovera kumba. Iyo Yekunaka Lab inoongorora inoomesa bvudzi pamatanho emitengo muLab nekuyera kuomesa kumhanya pane akaenzana emvere bvudzi masampuli, simba rekubuda kwemhepo, kuyera ...